Office Trainee | KTK Electrical Engineering Co., Ltd. ﻿
•	Production ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော စာရင်းဇယားများ ပြုလုပ်ရမည်.
•	စာရင်းများကို Record လုပ်နိုင်ရမည်
•	ဖုန်း call များဖြေဆိုခြင်း၊ email စစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်.
•	Store ပိုင်းကို ထိန်းသိမ်းရမည်။
•	အထက်လူကြီးက ချမှတ်ပေးသော ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်များ လုပ်နိုင်ရမည်.
•	ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိသူဖြစ်ရမည်.
•	MS Word, Excel သုံးနိုင်ရမည်
•	Internet email သုံးနိုင်ရမည်
•	မင်္ဂလာဒုံ, ဇေကမ္ဘာဝန်းတွင် အလုပ်လုပ်နီုင်သူဖြစ်ရမည်။
302 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment
Office Trainee Admin, Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon KTK Electrical Engineering Co., Ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Office Trainee Jobs in Myanmar, jobs in Yangon